၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ပန်းဝါ ခေါ် ရာမူးဒေသတွင် မူဆလင် အစွန်းရောက်များ၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တွေ့ရစဉ်။
ပန်းဝါ ခေါ် ရာမူးဒေသမှာ မနေ့ည ၁၀ နာရီလောက်ကနေ မနက် ၃ နာရီကျော်လောက်အထိ မူဆလင် အစွန်းရောက် နှစ်သောင်းငါးထောင်လောက် ချီတက်ဆန္ဒပြကြရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ လူနေအိမ်တွေကို မီးရှို့ခဲ့ကြတာပါ။
အဲဒီလို မီးရှို့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုမှာ အနည်းဆုံးလူပေါင်း ၂၀ လောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့တာက ဖေ့စ်ဘွတ် အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ မီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းစာဓာတ်ပုံ တွေ့ရှိရာက စတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ Daily Star အဆိုအရ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ဦးက မီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းစာဓာတ်ပုံကို အမှတ်မထင် ဖေ့စ်ဘွတ် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်မိရာက အခုလို အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာလို့ ရေးသားပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီလူငယ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာကို လည်း ပိတ်လိုက်ပြီး သူနဲ့ သူ့မိခင်ကိုလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံတဲ့နေရာကို ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ အေပီ သတင်းဌာနက ရေးသားပါတယ်။
ကော့ဘဇားခရိုင် ဒုတိယအကြီးအကဲ Jashim Uddin ပြောတာက ခရိုင်အတွင်းမှာ လူ ၄ ယောက်ထက် ပိုမစုရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နယ်ခြားစောင့်တပ် အပါအ၀င် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့် ချထားလိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ထားလိုက်နိုင်ပေမယ့် တင်းမာမှုတွေတော့ ရှိနေဆဲလို့ ဆိုပါတယ်။
Why the whole world and muslims world OIC are silence about the Bangalis attacked to Buddhist monestaries and pagodas in Bangaldesh??????
I am wondering why why why????
Buddhism ဆိုတာ လက်စါးချေတဲ့ ၀ါဒမဟုတ်သလို ငြိမ်ခံတဲ့ဝါဒလည်းမဟုတ်ပါ။
Oct 07, 2012 01:33 AM
နေရပ်- Houston, Texas
Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်မွတ်ဆလင်များက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်အကြူးစော်ကားထားသောဓာတ်ပုံများမှာရေတွက်မကုန်နိုင်အောင်များလှပါသည်။ဗုဒ္ဓတရားတော်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကယဉ်ကျေးမှုမရှိသေးသောအောက်တန်းစားလူဆိုးလူမိုက်မိစ္ဆာ၀ါဒီတို့ လုပ်သလိုမလုပ်ကြပါ။
Oct 01, 2012 07:44 PM
နေရပ်- Chiang Mai
On September32012,asuicide car bomber rammed intoaU.S. government vehicle in the northwestern city of Peshawar on Monday, killing two Pakistanis and wounding more thanadozen – including two Americans – in one of the worst attacks against the U.S. in Pakistan in recent years, shameless "COWARDLY" attack against US consulate personnel in Pakistan and praised local authorities' response to the scene.
"We very clearly condemn the attack on our consulate personnel," Clinton told reporters onavisit to Jakarta. "We deplore the cowardly act of suicide bombing and terrorism that has affected so many people around the world and which we must all stand against."
In my country, Thailand, our Thai people 5,469 was killed and 9,653 wounded by TERRORISTS MUSLIMS!!!! So I am very sorry to hear the news about Buddhist temples was burned and Buddhists people was attacked by TERRORISTS MUSLIMS. PLEASE STOP MAKING THAT "terrorism".
They did brutally.
Oct 01, 2012 03:39 AM